News - Ngosi
Bylọ ọrụ kandụl Winby bụ ụlọ ọrụ ọkachamara iji mepụta kandụl na-esi isi, ite kandụl, kandụl ogidi na kandụl nka. Anyị esonyela na Canton Fair ruo ọtụtụ afọ, ma dọtakwuo ọtụtụ ndị ahịa si ọtụtụ mba gburugburu ụwa. N'ihi ya, anya, anyị ka na-enwe ogologo na-adịgide adịgide imekọ ihe ọnụ mmekọrịta n'ihi na anyị elu àgwà 、 asọmpi price na kasị mma ọrụ. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa enyela anyị nnukwu nyocha maka ngwaahịa anyị.
Na Canton Fair, ụlọ ọrụ anyị dọtara ọtụtụ ndị hụrụ kandụl si n'akụkụ ụwa niile, ma ha nwere ezigbo mmasị na kandụl anyị na-esi ísì ụtọ. Anyị na-enye kandụl na iko iko dị iche iche, gụnyere iko iko iko, ụdị Yankee, iko square, ite tin, ite nchekwa. Na ọtụtụ kandụl nkà. N'ezie, ha nwekwara mmasị na ọrụ anyị ahaziri ahazi, n'ihi na ha nwere ike ibipụta ederede kachasị amasị ha ma ọ bụ eserese na kandụl na-esi ísì ụtọ kachasị amasị ha.
N'ihi ngwaahịa anyị na ọrụ ndị ahịa anyị, anyị meriri ihu ọma nke ọtụtụ ndị ahịa na Canton Fair. Iji maa atụ, otu n’ime ndị ahịa anyị eziterela anyị ozi email: Achọrọ m ịkwado gị. Ọrụ gị bụ otu n'ime ihe kachasị mma m hụtụrụla. N'ihi ọrụ kachasị mma gị, ọ dịghị ihe ga-echegbu onwe gị. Daalụ nke ukwuu.
Ọzọ mma ikwu, otu n'ime ndị ahịa anyị si UK emailed anyị: Achọrọ m iji ụlọ ọrụ gị ka m maara nke ọma na ị meela agba abụọ nke ihe atụ anyị n'efu. N'ihi ya, anyị na-enwe obi ụtọ ịkwụ ụgwọ ka anyị wee hụ na ngwaahịa anyị dị oke mma ma dịkwa njikere ịzụ ahịa ozugbo enwere ike.
A Japan ahịa kwuru: Ezi mma beeswax kandụl. Jiri nlezianya kwakọba ma nyefee ya n'oge. Ọrụ dị ngwa na omume enyi. Nwere ike ịtụ ọzọ.
Ndị a bụ ụfọdụ foto na ndị ahịa anyị maka ntụaka gị.